को हुन अर्जुनलाल ? जो आगामी ठमेल परिषद् नेतृत्वको लागि चर्चामा छन
प्रकाशित मिति: 2019/05/31
जेठ १७, काठमाण्डौ । ठमेल पर्यटन बिकास परिषद् (टीटीडिसी)को निर्वाचन यही जेठ २५ गते हुने निर्णयसँगै निर्वाचन सरगर्मी बढेको छ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा अध्यक्षका प्रत्यासीहरु मैदानमा उत्रिएका छन । नेतृत्वका आंकाक्षीहरुको भिडमा बर्तमान परिषद् कार्यसमिती सदस्य अर्जुनलाल प्रधानको नाम चर्चामा छ । ठमेलका पुराना बासिन्दा प्रधान बाल्यकाल देखीको ठमेलको स्वरुपसँग घुलमिल हुँदै हालसम्म आईपुग्दा समृद्ध ठमेलका लागि उनका आफ्नै योजना रहेका छन । नेतृत्वका लागि होडबाजी मात्रै गर्ने र समयानुकुल ठमेलले गति लिन नसकेको सन्दर्भमा युग सुहाउँदो ठमेलको परिकल्पना र स्पष्ट भिजनका साथ उनको उमेद्धवारीको चर्चा चुँलिदो छ ।
को हुन अर्जुनलाल प्रधान ।
ठमेलका रैथाने प्रधान विगत तीन दशकदेखी नेपली पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति हुन । बाल्यकाल देखी नै ठमेलको चित्र आफ्नै आँखाले हेर्दै र उतारचढाब भोग्दै यहाँसम्म आईपुग्दा यसबिचमा कोरिएका समृद्ध ठमेलका उनका आफ्नै सपनालाई मुर्तरुप दिन उनी लागि परेका छन । यसको अभ्यासका रुपमा लामो समयदेखी सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहँदै आएका छन । यसका साथै खेलकुद पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय बास्केटबल प्रतियोगितामा प्रबन्धकको रुपमा समेत भुमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति हुन । जो समृद्ध ठमेलको सपनासँग जोडिएका छन ।
ठमेलको बिकासमा उनको प्रतिबद्धता र उमेद्धवारीको औचित्य पुष्टी गर्न हामीले सोधेको प्रश्नमा उनी यसरी प्रश्तुत भए ।
प्रश्तुत छ, ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्(टिटीडिसी)का अध्यक्षका प्रत्यासी अर्जुनलाल प्रधानसँग गरिएको ताजा कुराकानी ।
१. परिषद्मा तपाईको उमेद्धवारी किन ?
ठमेल नेपाली पर्यटन क्षेत्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको छ । नेपाल आउने पर्यटकहरु मध्ये ८० प्रतिशत पर्यटकहरु एयरपोर्टबाट सिधै ठमेल प्रवेश गर्दछन । यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको पहिलो गन्तव्यको रुपमा रहेको ठमेलको सामाजिक स्वरुपले नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रको नै चित्र प्रश्तुत गर्ने भएकाले ठमेलमा पर्यटनमैत्री बातावरण श्रृजना हुनुपर्छ, बिकृती बिसंगती निरुत्साहित गर्दै यथार्थपरक ढंगले समृद्ध ठमेलको परिकल्पना साकार पार्नका लागि उमेद्धवारी दिएको हुँ ।
२. समृद्ध ठमेल बनाउन तपाईको आफ्नै योजना चै के छ ?
शान्तिसुरक्षाको उचित व्यावस्थापन पहिलो कुरा हो । पर्यटक प्रहरी, स्थानिय बासिन्दा र सरोकारवालासँग समन्वय गरी सिसिटिभी जडान कार्य पहिलो काम हुनेछ । दोस्रो ट्राफिक र पार्किङको दिर्घकालिन व्यवस्था मिलाउन पहल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ठमेल क्षेत्रको म्यापिङ सहि ढंगले गर्ने, पर्यटक सुचना केन्द्र, बातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण, सडक र सडक बत्तीको व्यवस्थापन, ढलनिकास र खानेपानीको दिर्घकालिन समाधान, घरधनी र व्यावसायी बिचको आपसी सम्बन्ध सुधार, सल्लाहकार समिति, सडक बालबालिका, मगन्ते र सडक व्यापारीको दिर्घकालिन समाधान, भिजिट नेपाल २०२० लाई सफल पार्न भुमिका, व्यावसायिक सुरक्षा, पर्यटकहरुको बसाई लम्ब्याउने बारे पहल, फ्रि वाईफाई जोन, ठमेल क्षेत्रका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने लगायतका कार्य सम्पन्न गर्न मेरो उमेद्धवारी हो ।
३. तपाई कस्को समर्थनमा अध्यक्षको निर्वाचनमा अग्रसर हुनुभएको हो ?
म आफै ठमेलको स्थानिय हुँ । व्यावसायी घरधनी लगायत ठमेल सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल गरेर नै उमेद्धवारी दिएको हुँ । राजनीतिक आस्था सबैको कुनै न कुनै तर्फ झुकाब हुन सक्ला, तर अहिलेको मेरो आस्था भनेको समृद्ध ठमेलको लागि हो । अन्य कुरा गौण हुन । यसअर्थमा अग्रज परिषद् सदस्य, व्यावसायी, ठमेलका स्थानिय बासिन्दा र शुभचिन्तकको सद्भावले नै अग्रसर भएको हँु । घरधनी र व्यावसायीबिचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मैले पूलको रुपमा काम गर्नेछु ।